मेल एन्हान्सर प्रो आईओएस:: भिटामिन तपाईंको मेल अनुप्रयोग। | आईफोन समाचार
मेल एन्हान्सर प्रो आईओएस:: भिटामिन तपाईंको मेल अनुप्रयोग।
अन्तमा मेल एन्हान्सर प्रो अब आईओएस with को साथ उपयुक्त छ। पर्खाइ लामो छ, तर यो लायक छ। जो कोहीले नेटिभ आईओएस मेल क्लाइन्ट, मेल प्रयोग गर्दछ, निश्चित रूपमा यसको फाइदाहरू मनपर्दछ तर केही आधारभूत सुविधाहरूको अभावलाई घृणा गर्दछ जस्तै प्रत्येक ईमेलबाट ईमेल खाताहरू भिन्न पार्न सक्षम हुनु, वा HTML हस्ताक्षरहरू। मेल एन्हान्सर प्रो यो र अधिक प्राप्त गर्दछ: अधिसूचनाहरू, नियमहरू सेट गर्नुहोस्, जवाफ दिनको लागि फरक हस्ताक्षरहरू, अगाडि वा कम्पोज गर्नुहोस् ... यो सबै र यसबाट अधिक सिडियाबाट आवश्यक चिमटामा। हामी तपाईंलाई तल तल देखाउँदछौं।
यदि यसको कुनै पनि आधारभूत र उपयोगी विशेषताहरू हाइलाइट गर्न आवश्यक छ भने, यो र the्गका मोतीहरूको भिन्नता हो। प्रत्येकको लागि र colorsहरू परिभाषित गर्नुहोस् र युनिफाइड ट्रे पहुँच गरेर तपाई कुन ईमेलमा प्रत्येक खातामा पुगेको छ भनेर जान्न सक्नुहुनेछ। को "अपठित", "फ्ल्याग गरिएको" वा "सबै" द्वारा ईमेल फिल्टर गर्न सक्षम हुनुहोस्। एउटै विन्डोबाट, बिभिन्न मेनूहरू मार्फत सार्नको लागि। आईओएस In मा तपाईं लेबलको साथ यो शीर्ष पट्टी पनि लुकाउन सक्नुहुन्छ, र तपाईं मात्र शीर्ष बारमा क्लिक गर्नुभयो भने मात्र यो देखाउन सक्नुहुन्छ। कार्यहरू एन ब्ल्क गर्नको लागि सबै सन्देशहरू छनौट गर्ने क्षमता यसका अन्य सुविधाहरू मध्येको हो।
अधिक उन्नत प्रयोगकर्ताहरूको लागि मेल एन्हान्सर प्रो पनि भारी संभावनाहरु प्रदान गर्दछ:
HTML क्षमताको साथ प्रत्येक खाताको लागि बिभिन्न हस्ताक्षरहरू। कम्पोज गर्न एक हस्ताक्षर सिर्जना गर्नुहोस्, अर्कोलाई जवाफ दिनको लागि अर्को र अगाडि अर्कोलाई, वा सबैको लागि समान हस्ताक्षर प्रयोग गर्नुहोस्।
ईमेलमा HTML कोड प्रयोग गर्नुहोस्
नियमहरू स्थापना गर्नुहोस्, जस्तो कि निश्चित प्रेषक वा विषयको साथ सन्देश सीधा मेलबक्समा जान्छ। सम्भावनाहरू विशाल छन्, मात्र सेटिंग्स मेनूमा हेर्नुहोस्। तपाईं ईमेलहरू हाइलाइट गर्न सक्नुहुनेछ जुन रंगका साथ स्थापित आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
फरक सूचना अधिसूचनाहरू, आईओएस सूचनाहरूबाट स्वतन्त्र, विभिन्न आवाज सूचनाहरू सहित।
फरक ईमेलको साथ प्रत्येक ईमेल खाता हाइलाइट गर्नुहोस्।
मेल फिल्टरहरूले तपाईंलाई नपढेका वा चिन्ह लगाइएको ईमेलहरू मात्रै देख्न अनुमति दिन्छ।
इशाराहरू प्रयोग गरेर द्रुत कार्यहरू (अहिले सम्म उपलब्ध छैन)
बनाउनुहोस् कि ईमेल खोल्नाले यसलाई पढिएको रूपमा चिन्ह लगाउँदैन, वा यो कि जब एक ईमेल मेटाउँदा अर्को खोल्दैन।
मेल एन्हान्सर प्रो आईओएस is उपलब्ध छ BigBoss रेपो मा। यो जनवरी २०१ 2014 भन्दा पहिले किन्नु भएकाहरूको लागि यसको मूल्य the ०.0,99 $, बाँकी सार्वजनिकको लागि $ 4,99.।। हुनेछ। यदि तपाईं यसलाई खरीद गर्नु अघि यसलाई प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ पृष्ठ.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » जेल » Cydia » मेल एन्हान्सर प्रो आईओएस:: भिटामिन तपाईंको मेल अनुप्रयोग।
मलाई छोड भन्यो
नमस्कार, यो ट्वीकले मलाई रारमा एट्याच्मेन्ट डाउनलोड गर्न र यसलाई ब्लुटुथद्वारा पीसी / म्याकमा पठाउन सक्षम हुन मद्दत गर्न चाहन्छु? म त्यो गर्न चाहन्छु र नेटिभ मेल अनुप्रयोगबाट यो सम्भव छैन .. कुनै सिफारिसहरू छन्?
DeJoTaDeEmE लाई जवाफ दिनुहोस्
लाइक। जैकोबो जाब्लोदोस्की भन्यो
यो अनुप्रयोग एक स्लोब हो (यदि तपाइँ केहि थोरै भएको बेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ भने?
लाइक। जैकोबो जाब्लोदोस्कीलाई जवाफ दिनुहोस्
उत्कृष्ट अनुप्रयोग, मैले मेरो ईमेलहरूलाई एक स्वचालित तरिकाले फोल्डरहरूमा क्रमबद्ध गर्न मद्दत गर्दछु, तर म «सामान्य ट्रे in मा रंग राख्न सक्दिन यदि यो एक वा अन्य हो, तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद।
मलाई तपाईको बुगुल मन पर्छ
शहरी स्यान्डोवल भन्यो
तपाईं मलाई कसरी स्तरहरू सिर्जना गर्ने भनेर बुझाउन सक्नुहुन्छ?
सहरी स्यान्डोवललाई जवाफ दिनुहोस्
IOS आईओएस अनुप्रयोगहरू जुन तपाईंको मुटुको दरलाई मापन गर्छन्
१GB जीबी सामसु। ग्यालेक्सी एस मा 5..16 जीबी भण्डारण मात्र छ